आँखा किन फरफराउँछ ? यस्ता छन् कारण र रोक्ने उपाय - Health Today Nepal
आँखा किन फरफराउँछ ? यस्ता छन् कारण र रोक्ने उपाय
May 18th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
एजेन्सी,जेठः अहिले पनि समाजमा आँखा फरफरायो भने कुनै घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । आँखाको फरफराई महिला र पुरुषमा अलग–अलग तरिकाले हुने विश्वास गरिन्छ। समाजमा पुरुषको दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचक मानिन्छ भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचक मानिन्छ । महिलाको देब्रे आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचकका रुपमा लिने गरिन्छ ।
तर,आँखा फरफराउनु पूर्णत वैज्ञानिक कारणसंग जोडिएको छ । यसमा आँखाको परेला फरफराउँछ। यो फरफराई केही सेकेण्डसम्म या केही घण्टासम्म जारी रहन्छ। कसै कसैमा भने हप्तौंसम्म पनि जारी रहनसक्छ । अधिकांशमा तल्लो परेला फरफराउने गरेपनि कसै कसैमा भने माथिल्लो परेला पनि फरफराउने गर्छ।
यसको वास्तविक कारण थाहा नभएपनि सुख्खा आँखा, प्रकाश सवेदनशिल आँखा, तनाव, थकान, क्याफिनको प्रयोग, अल्कोहल, पोषक तत्वको कमी तथा एलर्जी आदिका कारणले आँखा फरफराउँछ। यो कुनै गम्भीर समस्या भने होइन ।
तनावका कारणः जब हामी कुनै तनावमा हुन्छौं, हाम्रो शरीरले विभिन्न तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँछ। आँखा फरफराउनु पनि तनावको एउटा भाग हुनसक्छ। तनावलाई कम गर्नु नै आँखा फरफराउन रोक्ने उपाय हो।
थकानः तनाव तथा अन्य कारणबाट उत्पन्न अनिद्राले आँखाको परेलामा ऐंठन पर्छ ।
आँखा दुखाईः दृष्टिसंग सम्बन्धित तनावले पनि आँखाको परेला फरफराउँछ। खासगरी, आँखालाई बढी तनाव हुने गरी काम गर्दा यस्तो हुन सक्छ।
सुख्खा आँखाः बुढ्यौली लाग्दै जाँदा अधिकांश मानिसले आँखा सुख्खा हुने समस्या भोग्छन्। कम्प्युटरको बढी प्रयोग गर्ने, एन्टिहिस्टामिन या एन्टिडिप्रेसान्टका औषधि बढी प्रयोग गर्ने, कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्ने र क्याफिन तथा अल्कोहल प्रयोग गर्नेहरुमा सुख्खा आँखाको समस्या हुन्छ। यस्ता व्यक्तिका आँखा बढी फरफराउँछ।
पोषकतत्वको असन्तुलनः म्याग्नेसियमजस्ता केही पोषक तत्वको कमी हुँदा पनि परेला फरफराउँछ। यद्यपि यो कुरा अहिलेसम्म वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि हुन भने सकेको छैन।
एलर्जीः आँखाको एलर्जी हुने, रातो हुने, सुन्निने या आँसु बढी आउने मानिसको आँखा फरफराउँछ। त्यसैले आँखा फरफराउने समस्या बढी देखिन थाल्यो भने तत्काल नेत्र चिकित्सकसंग जाँच गराउनुपर्छ ।
Previous article रक्तचाप नापौँ अभियानः नेपालका आधाभन्दा बढी नागरिक आफ्नो रक्तचापको स्थितिबारे अझै अनविज्ञ
Next article चन्द्रागिरि नगरपालिकाले दीर्घरोगीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने